News Collection: नेपाली सिरियल किसर
नेपाली सिरियल किसर
इमरान हासमी बलिउडका व्यस्त नायक हुन्। रोमान्टिक अभिनयमा उनी सक्षम मानिन्छन्। राम्रो अभिनय गरेर मात्र उनी व्यस्त भएका होइनन्। उनको नाममा एउटा उपनाम पनि जोडिएको छ, 'सिरियल किसर' अर्थात् श्रृंखलाबद्ध चुम्बन गर्ने नायक। चुम्बनमा इमरान यति खप्पिस छन् कि उनले अभिनय गरेका प्रायः सबै चलचित्रमा निर्देश्ाकले चुम्बनका दृश्य अनिवार्य रूपमा समावेश गर्छन्।
नायक मुकेश ढकाल नेपाली चलचित्रमा 'सिरियल किसर' बन्ने यात्रामा अघि बढेका छन्। र्‍याम्प मोडलिङबाट ग्ल्यामरस क्षेत्रमा प्रवेश गरेका यी भोजपुरे नायक पछिल्लो समय 'सिरियल किसर' कै रूपमा स्थापित भएका छन्।
करिब पाँच वर्षदेखि नेपाली चलचित्रमा व्यस्त मुकेशले यो अवधिमा करिब एक दर्जन चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन्। तीमध्ये आधाभन्दा बढी चलचित्रमा उनले विभिन्न नायिकालाई चुम्बन गरेका छन्। अवस्था यस्तो छ कि मुकेश नायक हुने चलचित्रका लेखकले चलचित्रमा चुम्बनको दृश्य अनिवार्य रूपमा समावेश गर्छन्। निर्देश्ाक सोभित बस्नेतको पछिल्लो चलचित्र 'प्लान' को कथामा मुकेशले चुम्बन गर्नुपर्ने कुनै पनि दृश्य तथा घटनाक्रम उल्लेख थिएन। दर्शकले मुकेशलाई 'सिरियल किसर' का रूपमा महत्त्व दिएपछि निर्देश्ाक सोभित बस्नेत आफ्नो चलचित्रमा चुम्बनको दृश्य राख्न बाध्य भए। अन्ततः उनले एउटा गीतमा मुकेशलाई नायिकाहरूसँग चुम्बन गराए। चलचित्रमा मुकेशलाई तीनवटी नायिकाले मन पराउँछन्। अनुष्का ढकाल, रागिनी खड्गी तथा अनिता दाहाल मुकेशको व्यक्तित्वबाट प्रभावित छन्। चलचित्रको एउटा गीतमा तीनैवटी नायिकाले मुकेशलाई चुम्बन गरेका छन्। रमाइलो कुरा के छ भने तीनवटै नायिकासँगको चुम्बन गरिएका दृश्य काल्पनिक हुन्। तीनै जना नायिकाले मुकेशसँग चुम्बन गरेको सपना देख्छन्। 'मुकेश चुम्बनकै कारण लोकपि्रय भएकाले हामीले एउटै गीतमा भए पनि उनलाई नायिकासँग चुम्बन गराएका हौं,' निर्देश्ाक बस्नेत भन्छन्— 'मुकेशको छविअनुसार काम गराइएको हो।'
बलिउड र हलिउडका चलचित्रमा अधर चुम्बन सामान्य भएको वर्षौं भैसकेको छ। नेपाली चलचित्रमा भने अधरपानसहितका चुम्बन दृश्यको प्रयोग भर्खरै मात्र प्रारम्भ भएको छ। हिन्दी तथा अंग्रेजी चलचित्रमा समावेश गरिने चुम्बन दृश्यका नियमित दर्शकहरू नेपाली चलचित्रमा समेत यस्तो प्रयोग हुन थालेपछि विभिन्न टीकाटिप्पणी गर्न थालेका छन्।
यसअघि पनि नेपाली चलचित्रका नायक-नायिकाले चुम्बन नगरेका होइनन्। राजेश हमालदेखि भुवन केसीसम्मका नायकले करिश्मा मानन्धरदेखि रेखा थापासम्मलाई चुम्बन गरेका छन्, तर ती नायकका चुम्बन चलचित्रको कथाअनुसार आए र गए। ५ फिट ८ फिट अग्ला मुकेश ढकालमा भने यो कुरा लागू हुँदैन। 'खै कसरी-कसरी म त सिरियल किसर भैसकेछु,' नयाँ बानेश्वरस्थित रोजमेरी क्याफेमा साप्ताहिकसँग कुराकानी गर्दै लजालु स्वभावका मुकेशले मुख खोले— 'मैले अहिलेसम्म कुनै पनि निर्देशकलाई मेरो चलचित्रमा चुम्बनको दृश्य राख्नुपर्‍यो भनेको छैन। उहाँहरू कथाको मागअनुसार चुम्बन दृश्य राखिएको बताउनुहुन्छ। निर्देश्ाकले चुम्बन गर्नुपर्‍यो भनेपछि हामी कलाकारले नगर्ने कुरै भएन।'
एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न आधा दर्जन चलचित्रमा नायिकालाई चुम्बन गरेपश्चात् सञ्चारमाध्यमहरूमा मुकेशलाई सिरियल किसरको उपाधि दिन थालियो। कतिपयले त चुम्बनकै कारण मुकेश तनावमा आएको टिप्पणीसमेत गरे। 'वास्तवमा म चुम्बनका कारण कहिल्यै तनावमा परेको छैन,' मुकेश भन्छन्— 'मेरो विचारमा चुम्बन गर्नु पनि कलाकारिताकै एउटा अंग हो।'
मुकेश आफूलाई सिरियल किसरका रूपमा चर्चित बनाइएकोमा अचम्मित भने छन्। 'मभन्दा पहिले पनि थुप्रै नायकले विभिन्न नायिकासँग चुम्बन नगरेका होइनन्,' मुकेश जिज्ञासा राख्छन्— 'तर म मात्र कसरी सिरियल किसरमा छनौट भएँ, आफैंलाई अचम्म लागेको छ।'
मुकेश ढकाल नायिका मेलिना मानन्धरका श्रीमान् पनि हुन्। करिब ६ वर्षअघि एउटा बंगाली चलचित्रको छायांकनका क्रममा मुकेश र मेलिनाको भारतको सिलिगुडीमा पहिलो भेट भएको थियो। सिलिगुडीमा छायांकन भएको एउटा बंगाली चलचित्रमा नायकको भूमिका निर्वाह गरेपछि उनको अभिनय करियरले गति लिएको थियो। नृत्य निर्देश्ाक कमल राईको सिफारिसमा उक्त चलचित्रमा नायकको भूमिका निर्वाह गर्न सिलिगुडी पुग्दासमेत उक्त चलचित्रकी नायिका को हुन्, उनलाई थाहा थिएन। 'नायिका पनि नेपाली भन्ने सुनेको थिएँ,' मुकेश सम्झन्छन्— 'छायांकनको पहिलो दिन मात्र मेलिना मानन्धर मेरी नायिका हुन् भन्ने थाहा पाएँ। काम गर्दै गएपछि हाम्रो मन मिल्यो, काठमाडौं फर्किएको केही समयपछि हामीले विवाह गर्‍यौं।'
मेलिना मानन्धरसँग वैवाहिक जीवन प्रारम्भ गरेपछि नै मुकेश ढकाल नेपाली चलचित्रमा स्थापित भएका हुन्। एकपछि अर्को चलचित्रमा नायिकाहरूलाई चुम्बन गरिरहँदा मुकेशकी नायिका श्रीमती मेलिनाको प्रतिक्रियाचाहिं कस्तो छ त ? मुकेश भन्छन्— 'उनी पनि कलाकार भएकाले यो कलाकारिताकै एउटा भाग हो भन्ने कुरा बुझेकी छिन्, त्यसैले उनको प्रतिक्रिया सामान्य नै हुन्छ।' श्रीमान्ले एकपछि अर्को गर्दै नयाँ-नयाँ नायिकासँग चुम्बन गरेका कुनै पनि चलचित्र मेलिनाले नहेरेको मुकेशले बताए।
मुकेशले पहिलो पटक नायिकालाई चुम्बन गरेको चलचित्र हो— 'आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ'। उक्त चलचित्रमा उनले नायिका अरुणिमा लम्साललाई चुम्बन गरेका थिए। चलचित्रको एउटा दृश्यमा अरुणिमा तथा अन्य साथीहरूबीच एउटा बाजी पर्छ। बाजी हारे सबैभन्दा पहिले उनीहरूको अघि आउने पुरुषलाई चुम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। संयोगले एक जना वृद्ध अरुणिमाको अगाडि आइपुग्छन्, तर नजिकै आइपुग्न लाग्दा वृद्धले बाटो परिवर्तन गर्छन्, अरुणिमाले उनलाई चुम्बन गर्नुपर्दैन। वृद्धको ठ्याक्कै पछि मुकेश ढकाल हुन्छन्। अरुणिमाले बाध्य भएपछि चलचित्रको कथाअनुसार अपरिचित मुकेशलाई चुम्बन गर्छिन्। केही सेकेन्डको उक्त चुम्बन नै मुकेश ढकालको पहिलो चुम्बन हो।
'आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ' पछि मुकेशले चलचित्र 'निगरानी' पुनः नायिका अरुणिमा लम्साललाई नै चुम्बन गरे। मुकेश-अरुणिमाबीचको उक्त चुम्बनले ठूलै हंगामा मच्चायो। त्यसपछि मुकेशले ऋषि लामिछानेकै चलचित्र 'हाम्रो माया जुनी-जुनीलाई' मा नायिका नीता ढुंगानालाई चुम्बन गरे। उक्त चलचित्रमा मुकेश-नीताबीच चुम्बनका दुईवटा दृश्य छन्। एउटा दृश्यमा मुकेशले नीतालाई जबरजस्ती चुम्बन गरेका छन् भने अर्को दृश्यमा दुवैको सहमतिमा चुम्बन गरिएको देखाइएको छ। यो चलचित्र प्रदर्शन हुन बाँकी छ।
चलचित्र 'आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ' मा प्रेमको उत्कर्ष देखाउन चुम्बनको दृश्य समावेश गरिएको मुकेश बताउँछन्। विभिन्न चलचित्रमा गरिएका चुम्बन स्मरण गर्दै मुकेश भन्छन्— 'चलचित्र 'निगरानी' मा मेरो ओठ अरुणिमाको ओठमा जोडिएको मात्र थियो। 'आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ' मा भने अलि गहिरो चुम्बन गरिएको छ। उक्त चलचित्रमा अरुणिमा र मेरा ओठहरू सल्बलाएका पनि छन्। मुकेशका अनुसार प्रदर्शनको तयारीमा रहेको चलचित्र 'हाम्रो माया जुनी-जुनीलाई' मा भने उनले नायिका नीता ढुंगानालाई जबरजस्ती चुम्बन गरेका छन्। त्यसपछि मुकेशले चलचित्र 'प्लान' मा एकै पटक तीन जना नयाँ नायिकालाई चुम्बन गरेका हुन्।
चलचित्र सिलसिलामा राज तिमल्सेना र सोनिया केसीलाई चुम्बन गराउने निर्देश्ाक राजेन्द्र उप्रेतीले मुकेश र अरुणिमालाई 'निगरानी' मा चुम्बन गराएका थिए, तर निर्देश्ाक उप्रेतीले चलचित्र 'मनमनै मन पराएँ' मा भने मुकेश र ऋचासिंह ठकुरीलाई चुम्बन गराएनन्।
मुकेश भन्छन्— 'मैले अहिलेसम्म गरेका चुम्बन हलिउड र बलिउडका चलचित्रको जस्ता डरलाग्दा छैनन्, नेपाली दर्शकहरूले पचाउने शैलीका छन्।' मुकेशका अनुसार माया-प्रेम देखाउन गरिने स्वाभाविक प्रक्रिया अर्थात् चुम्बनलाई अब नेपाली चलचित्रमा पनि सामान्य मानिनुपर्छ।
निर्देश्ाक ऋषि लामिछाने चलचित्र 'आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ' व्यावसायिक रूपमा सफल हुनुमा मुकेश-अरुणिमाबीचको 'टङ किस' लाई मुख्य कारक मान्छन्। 'फिल्म सफल हुनुमा चलचित्रको चुम्बन दृश्यले उल्लेखनीय भूमिका खेल्यो,' लामिछाने भन्छन् — 'टिनएजर तथा अधबैंसे दर्शकले निकै मन पराए।' प्रेमिकाले आफ्नो प्रेमीप्रतिको प्रेमभाव अभिव्यक्त गर्ने माध्यमका रूपमा उक्त दृश्य समावेश गरिएको बताउादै ऋषि भन्छन्— 'उक्त चुम्बन युवावर्गको रोजाइमा पर्न सफल भयो। दर्शक तान्नका लागि पनि यस्ता दृश्य आवश्यक हुँदो रहेछ।'
मुकेशलाई आगामी दिनमा नायिका करिश्मा मानन्धरसँग काम गर्ने चाहना छ। 'चुम्बनकै लागिचाहिँ होइन है,' मुकेश भन्छन्- 'उहाँसँग जोडीका रूपमा काम गर्न इच्छुक छु।' मुकेशलाई मेलिनासँग पनि काम गर्ने रहर छ। 'म र मेलिना श्रीमान्-श्रीमती भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि नेपाली चलचित्रमा नायक-नायिकाका रूपमा देखिएका छैनौं, मुकेश भन्छन्— 'भविष्यमा एउटा चलचित्रमा चाहिं सँगै काम गर्ने मन छ।'
सिरियल किसर बन्नु संयोग मात्र हो
- मुकेश ढकाल
तपाईं सिरियल किसर नै हो ?
-हाँसो) होइन म त केवल कलाकार हुँ। कलाकारले अभिनय गर्ने क्रममा जे-जस्तो भूमिका पाउँछ, निर्वाह गर्नुपर्छ। चुम्बनको दृश्य पनि उसकै एउटा उदाहरण मात्र हो।
तर तपाईंलाई ँसिरियल किसर’ नै भनिन्छ नि ?
दर्शकहरूले माया गरेर भन्नुभएको हो भने त राम्रै कुरा हो तर सञ्चारमाध्यमले चाहिं अलि बढी नै हल्ला मच्चाएजस्तो लाग्छ।
चलचित्रको चुम्बनले श्रीमती त रिसाउनुभएको छैन नि ?
मेलिनालाई कलाकारले जस्तो पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा भएकाले रिसाउने कुरै आउँदैन।
चुम्बन दृश्य नभएका चलचित्र नै खेल्दिनँ भन्नुहुन्छ रे ?
कसले भन्यो त्यस्तो ! यो गलत आरोप हो। उल्टो निर्देश्ाकहरूले नै मलाई चलचित्रको स्त्रिmप्टमै चुम्बन दृश्य समावेश गरिएको कुरा जानकारी गराउनुहुन्छ।
बलिउडको इमरान हासमी बन्ने बाटोमा अघि बढ्नुभएको हो ?
त्यस्तो होइन, एकपछि अर्को चलचित्रमा चुम्बन गर्नु संयोग मात्र हो। इमरान नै बन्न खोजेको चाहिं होइन, म मुकेश ढकाल नै ठीक छु।
अहिलेसम्म कति जना नायिकालाई चुम्बन गर्नुभयो ?
मैले अहिलेसम्म १० वटा चलचित्रमा अभिनय गरेँ, तीमध्ये चारवटा चलचित्रमा ६ जना नायिकालाई चुम्बन गरें। 'आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ' तथा 'निगरानी' मा अरुणिमालाई चुम्बन गरेँ भने 'हाम्रो माया जुनी-जुनीलाई'मा नीता ढुंगानालाई। प्लानमा तीन जना नयाँ नायिकालाई चुम्बन गरेको छु।
सबै चुम्बन दृश्य अर्थपूर्ण छन् ?
सबै चुम्बन दृश्यले चलचित्रको कथामा अर्थ बोकेका छन्।
कुन नायिकासाग चुम्बन गर्दा रमाइलो भयो ?
चलचित्रको पर्दामा मात्र मैले एकान्तमा कुनै नायिकालाई चुम्बन गरेजस्तो देखिन्छ, यद्यपि वास्तविकता त्यस्तो हुँदैन। चलचित्रको छायांकनस्थल वरपर लाइट, क्यामेरा तथा निर्देशकको एक्सन-कटमा बढी ध्यान जान्छ। त्यो मेरो कामको एउटा भाग भएकाले निर्देश्ाकहरूले जे गर भन्छन् म त्यसै गर्छु।
कथाको माग नै चुम्बन थियो
मुकेश ढकालसँगको चुम्बन दृश्य चलचित्रका लागि अनिवार्य थियो ?
अनिवार्य भएकाले नै त्यो दृश्य दिन तयार भएकी हुँ, अनावश्यक भएको भए
मुकेशले जबरजस्ती चुम्बन गरेको भनिँदैछ नि ?
चलचित्रको कथामै नायकले नायिकालाई जबरजस्ती चुम्बन गर्नुपर्नेछ। त्यसैले चलचित्रको पहिलो चुम्बन जबरजस्तीजस्तै लाग्छ भने दोस्रो चुम्बन
हाम्रो माया जुनी-जुनीलाई’ तपाईंहरूकै चुम्बनका कारण सफल हुनेछ भनिँदैछ नि ?
त्यो कुरा त मैले कसरी भन्नु तर दर्शकलाई त्यो दृश्यले मनोरञ्जन दिने कुरामा
चुम्बन अनुभव कस्तो रह्यो ?
एकान्तमा, कसैले नदेख्ने गरी गरिएको भए अनुभव गर्न पाइन्थ्यो होला। चलचित्रको छायांकनमा धेरै जना कलाकार तथा प्राविधिकहरूका अगाडि चुम्बन गर्नुपर्ने भएकाले कति बेला त्यो दृश्य सकिन्छ भन्ने कुरामा मात्र ध्यान जाँदो रहेछ।
केही अन्य चुम्बन
भर्खरै प्रदर्शन भएको चलचित्र 'त्यो दश घण्टा' नायक विनोद न्यौपाने तथा नायिका सुमी अधिकारीले चौध सेकेन्ड लामो चुम्बन गरेका छन्। केही वर्षअघि प्रदर्शन भएको चलचित्र 'सिलसिला' मा नायक राज तिमिल्सिना र नायिका सोनिया केसीबीचको चुम्बन दृश्य चर्चित भयो। गत वर्ष प्रदर्शन भएको चलचित्र 'द युगदेखि युगसम्म' मा नायक राजेश हमाल तथा नायिका नन्दिता केसीबीचको चुम्बन पनि चर्चाको विषय बनेको थियो।